Kenya: Kama Baxayno Soomaaliya – Radio Daljir
Nofeembar 17, 2015 2:52 b 0
Somalia, November 17, 2015 (Daljir) —Dowladda wadanka Kenya ayaa cadaysay inaysan xilligaan ciidamadeeda Milatarigu ka bixi doonin gudaha wadanka Soomaaliya, kadib markii barlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya looqaybiyey qaraar kadhan ah joogitaanka ciidamada Kenya ee Soomaaliya.
Rijel Umamo xoghayaha wasaaradda gaashaandhiga ee wadanka Kenya ayaa sheegtay in ciidamada wadankeeda ee jooga Soomaaliya ay kujoogaan sifo sharciga waafaqsan maadaama ay qayb kayihiin howlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM.
“Ciidamadeenu iskama joogaan Soomaaliya ee waxa ay qayb kayihiin howlgalka AMISOM waxaana ay ku shaqeeyaan shuruucda iyo aragtida AMISOM, waxaan u joognaa Soomaaliya midowga Africa iyo beesha caalamka oo taageeray dedaalkeena nabadaynta Soomaaliya” Ayey tiri Rijel.
Xoghayaha ayaa sheegtay inay jiraan warar gaar ah oo ay buunbuuniyeen sida ay sheegtay siyaasiyeen Soomaaliyeed iyo kuwa Kenyan ah oo ay sheegtay inaysan waxba ka bedeli doonin dedaalka wanaagsan ee ay sheegtay inay kusii wadayaan taageerada Soomaaliya.
Hadalka xoghayaha ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan ra’iisul wasaaraha Soomaaliya uu madaxda Kenya kala hadlay sidii ay meesha uga saari lahaayeen derbiga sharci darrada ah ee ay Kenya doonayso inay kadhisto xuduudka Soomaaliya.